Shiinaha Qiimaha ugu Fiican SC(B) 10 Transformer nooca engegan oo leh cabbir farsamo Supplier-shengte saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Shengte
Qiimaha ugu Wanaagsan SC(B) 10 Transformer nooca engegan oo leh cabbiro farsamo Supplier-shengte
Khasaare hooseeya, dareere qayb yar oo hooseeya, qaylada hoose, kulaylka xoogga leh ee daadinta, 120% hawlgalka culeyska ee lagu qiimeeyay xaaladaha qaboojinta hawada ee qasabka ah.
Waxqabadka wanaagsan ee qoyaanka.Waxay u shaqayn kartaa si caadi ah oo ka hooseeya 100% qoyaan.Waa la shaqayn karaa iyada oo aan la qalajin ka dib marka la xidho.
Hawlgal badbaado leh, aan guban karin oo aan dabci karin, wasakh la'aan, ayaa si toos ah loogu dhejin karaa xarunta xamuulka.
Waxay ku qalabaysan tahay nidaamka ilaalinta heerkulka ugu fiican si ay u bixiso dammaanad lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay hawlgalka badbaadada leh ee transformers.
Dayactir la'aan, rakibid fudud, kharash hawl yar oo dhamaystiran.
Kalsoonida sare.Sida lagu sheegay cilmi-baadhis lagu sameeyay hawl-galka badeecadaha la hawl-geliyay, isku halaynta badeecadahaasi waxa ay gaadheen heer caalami ah.
Epoxy resin cast SC (B) 10, SC (B) 11-50 ~ 2500 taxane koronto qallalan oo dahaaran, oo ku haboon huteelada, daaraha dhaadheer, xarumaha ganacsiga, meelaha la dego, goobaha ciyaaraha, dhirta batroolka, garoomada diyaaradaha, dekedaha, tareenada dhulka hoostiisa mara, iwm.
1. Low sanqadh: design circuit magnetic macquul ah iyo xulashada of tayo sare leh ku jihaysan qabow xaashi bir silikon giringiriyey, buuxa oblique afar-tol lamination tallaabo, geeddi-socodka shirarka yaraynta qabyo gaar ah, si heerka qaylada waa ka hooseeya heerka qaranka.
2. Dheecaan maxalli ah: gariiraddu waxa ay qabataa tignoolajiyada wax shubista ee horumarsan ee caalamiga ah ee ugu dambaysay, si ay xabagta ugu shubto faakuum iyo cadaadis.Dheecaannada maxalliga ah waa mid yar, kaas oo hubin kara hawlgalka badbaadada muddada dheer ee hoos yimaada tamarta shaqada.
3. Awood xoog leh oo looga hortagayo wareegga gaaban ee degdega ah: gariiradda loo isticmaalo xirxirida qaab dhismeedka fiilooyinka dhalada epoxy, vacuum shubaya lakabyada dabaysha, u-rogrogmi kara xabagta, ka dib daawaynta, gariiradda si ay u sameeyaan awood sare oo jidh adag, iyo isticmaalka qaab dhismeedka saxan iyo meelaynta block jidka kor iyo hoos, si loo hubiyo in transformer xoogga farsamo ee dhan, ka dhigi alaabta leeyihiin awoodda wareegga gaaban sare.
4. Iska caabin xooggan oo xoog leh: qaab-dhismeedka wareega ee gaarka ah iyo qaab-dhismeedka foil-ka ayaa lagu ansixiyay kooxda daadinta, taas oo yareyn karta tamarta u dhaxaysa lakabyada, hagaajinta qaybinta korantada, waxayna yeelan karaan caabbinta saameynta hillaaca xooggan.
SC(B)10beegyada farsamada qalalan
Qaabka uk% Luminta hawada (w) Khasaare (120C) (W) 0.1 LPA(AN) DB Cabbirka mm Wadarta (kg) Terminalka danab hooseeya
SC10-125/10 470 1850kii 0.7 43 1050x750x1057 550 550 360 190 300 290 940
SCB10-500/10 1160 4800 0.6 46 1255x860x1195 660 660 430 120 269 269 1945kii (c)
SCB10-1000/10 1770kii 8130 0.4 48 1500x1270x1385 820 820 515 145 333.5 331.5 3395 (d)
SCB10-1250/10 2090 9690 0.4 49 1580x1270x1597 820 820 540 185 332 338 3520 (iyo)
SCB10-2500/10 3600 17170kii 0.3 50 1890x1270x2020 1070 1070 640 205 380 393 6670 (g)
SCB10-1600/10 8 2450 12960kii 0.3 49 1680x1270x1680 1070 1070 565 185 338 345 3720 (f)
SCB10-2000/10 3050 15960kii 0.3 50 1885x1270x1850 1070 1070 615 205 338 347 4920 (g)
SCB10-2500/10 3600 18890kii 0.3 50 1910x1270x2080 107 1070 640 205 380 393 5900 (g)
Qiyaasaha farsamada ee S(B)H15-M-30~1600/10/0.4
SC11-100/10 350 1480kii 1.5 41 1030x750x1020 550 550 350 190 293 260 830 (a)
SC11-125/10 410 1740kii 1.4 42 1050x750x1057 550 550 360 190 300 290 940
SCB11-500/10 970 4600 1 45 1255x860x1195 660 660 430 120 269 269 1945kii (c)
SCB11-1250/10 1720kii 9100 0.3 48 1580x1270x1597 820 540 540 185 332 338 3520 (iyo)
SCB11-2000/10 2660 14960kii 0.3 49 1885x1270x1850 1070 1070 615 205 347 338 4920 (g)
SCB11-2500/10 3200 17780kii 0.2 49 1910x1270x2080 1070 1070 640 205 393 590 (g)
Hore: Qiimaha ugu Fiican DFW-12 Cable Branch Box Supplier-shengte
Xiga: transformer nooca qalalan
transformer nooca qalalan